एक्ली महिला सांसद् - BirtaJyoti
एक्ली महिला सांसद्
adminDecember 18, 2017 12:00 am 0
झापा । झापा क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पवित्रा निरौला खरेल प्रदेश नम्बर–१ कै एक मात्र महिला सांसद् हुन् । पवित्रा वाम गठबन्धनबाट झापा–२ मा उम्मेद्वार बनेकी थिइन् ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सोही क्षेत्रबाट पराजित पवित्रा यसपटक भने भारी मतान्तरले विजयी भइन् । उनले कांग्रेसका झापा जिल्ला सभापतिसमेत रहेका उद्धव थापालाई १३ हजार ७ सय ६७ मतान्तरले पराजित गरिन् ।
पवित्राले ४५ हजार ८ सय १७ मत प्राप्त गर्दा पराजित उम्मेदवार थापाले ३२ हजार ५० मत पाए । १ लाख १८ हजार १ सय ९६ मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा ८५ हजार ८ सय १६ मत खसेको थियो ।
पवित्रा एमालेकी सक्रिय कार्यकर्ता मात्र होइनन्, पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा समेत छिन् । हाल एमाले १ नम्बर प्रदेश सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेकी पवित्रा तीन दशकयता झापामा रहेर सक्रिय राजनीति गरिरहेकी छिन् ।
निरंकुश राज्य सत्ताको दवदवामा आफूलाई जोगाउन हम्मेहम्मे परेका बेला पनि राजनीतिमा उनी उत्तिकै सक्रिय थिइन् ।
निरन्तरको संघर्षले आफूलाई सांसद्सम्म डोहोर्‍याएको उनले बताइन् । ‘यसमा मेरो पार्टी, पार्टीका अग्रज नेताहरु, मतदाता सबैको सहयोग छ,’ पवित्राले भनिन्, ‘अघिल्लो पटक पराजित भए पनि अब यस ठाउँको विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण काम गर्ने ठाउँमा पुगेकी छु ।’
राजनीतिमा पवित्राको पाइला कहिल्यै रोकिएनन् । एउटा अनन्त यात्रामा उनका अगाडि समय मात्रै त्यस्तो साक्षी थियो, जसले सधैँ झक्झक्याएर उनलाई साथ दिइरह्यो । नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय भएर तीन दशकको समय बिताइरहँदा पवित्रा सांसद्का रुपमा उदाइसकेकी छन् ।
२०३६ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कोषाध्यक्षबाट प्रारम्भ भएको पवित्राको राजनीतिक यात्रा निरन्तर छ । २०३६ सालमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा रहँदा विद्यार्थी युवा दस्ताको एउटा दरिलो सिपाही थिइन्, पवित्रा । फराकिलो आत्मविश्वास र दृढताले उनलाई राजनीतिको यो यात्रामा कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा स्थापित गरिरह्यो ।
२०३८ मा एकताको छैठौँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन राजधानी काठमाडौँ गइरहँदा प्रहरी घेराबन्दीमा परेकी उनी शौचालयमा लुकेर बच्न सफल भइन् । २०३८ सालतिर अखिल नेपाल महिला संघको गाउँ समिति सदस्य हुँदै उनको राजनीतिक यात्रा अघि बढ्छ । त्यो बेला उनले जिल्ला तयारी समितिको अध्यक्ष हुने मौका पाइन् ।
२०४० सालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा दमकमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रम सकेर इन्द्र बुढाथोकीको घरमा समीक्षा बैठक बसिरहेका बेला उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो ।
२६ दिन प्रहरी हिरासतमा बिताउँदा पाएको यातना भनिसाध्य छैन । पवित्रासँगै दीपक कार्की, लीला कट्टेल पनि जेल परे त्यो बेला । विष्णु खँड्का र सीता उप्रेती प्रहरी हिरासतबाटै छुटे । तर, पवित्रालाई भने प्रहरीले झापा कारागार चलान गर्‍यो । तीन वर्षको जेल जीवनपछि २०४३ सालमा उनी मुक्त भइन् ।
२०४४ सालतिरको कुरा हो, पार्टीले उनलाई इलाम पठायो । दुई वर्ष इलाममा बसेर उनले पार्टीको काम गरिन् । त्यो बेला इलाम जिल्ला कमिटीकी सदस्य थिइन्, पवित्रा । २०४६ सालको आन्दोलनअघि अनेमसंघको राष्ट्रिय सम्मेलन भयो ।
त्यहाँ उनले झापाबाट प्रतिनिधित्व गरिन् । केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित पनि भइन् । सम्मेलनले इलाम कारागारमा रहेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई संघको अध्यक्ष बनायो । १७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनेको उनलाई सम्झना छ ।
२०४७ सालमा पवित्राको बिहे भयो । उनका बेहुला थिए नरेश खरेल, जो कम्युनिष्ट राजनीतिका एक जना असल र इमान्दार सिपाही हुन् । जेलनेल र यातनाको कहालीलाग्दो संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन बिताएका नरेश इमान्दारिताको कसीमा कहिल्यै घटी छैनन् ।
उनी आदर्श राजनीतिका अग्ला पुरुष हुन, निष्ठाका प्रतिमूर्ति हुन्, जो कहिल्यै कसैलाई बिझाउँदैनन् ।
‘उहाँसँग चिनजानै थिएन’, पवित्राले भनिन्, ‘पार्टीले नै हाम्रो बिहेको चाँजोपाँचो मिलाइदियो । खुशीसाथ हामी बैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्‍यौँ ।’ २०५४ सालमा जिल्ला विकास समिति झापाको मनोनित सदस्य हुन् पवित्रा । यसबाहेक सामाजिक संघसंस्थामा उनको संलग्नता र योगदान पनि उत्तिकै छ ।
विर्तामोड खानेपानी तथा सरसफाई समितिमा पवित्राले १० वर्ष बसेर काम गरेकी छिन् । एक कार्यकाल कोषाध्यक्ष र अर्को कार्यकाल उपाध्यक्षको सशक्त भूमिकामा देखिएकी उनी जनताका बीचमा काम गर्न रमाउँछिन् । त्यसैमा जीवनको खुशी मिल्छ उनलाई ।
उनी आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा फराकिलो पार्न चाहन्छिन् । ‘जनताबाट अनुमोदित प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्ने मेरो इच्छा थियो, अब पूरा भयो’, उनले भनिन्, ‘जनताप्रतिका सबै अभिभारा र जिम्मेवारी पूरा गर्न म परिपक्व छु जस्तो लाग्छ ।’
तस्वीरः प्रदीप बस्नेत
आर्मीसँग एपीएफ पराजित
झिलझिले । झापाको शिवसताक्षीस्थित झिलझिलेमा जारी दोस्रो सताक्षी गोल्डकपअन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी भएको छ । आर्मीले अर्को विभागीय टोली ... Read More
समाजबाद के हो ?
admin- February 7, 2018
- भवानीप्रसाद दंगाल बैज्ञानिक समाजबादका जन्मदाता कार्ल माक्र्स हुन । कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्केल्सले सन १८४८ मा प्रकासित गरेको कम्युनिष्ट घोषणा पत्रमा पहिलोपटक बैज्ञानिक ... Read More
admin- January 9, 2018
झापा । बिर्तामोडस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको छेउमा मुडामा बसेर अरुको भविष्य हेरिरहेका ज्योतिषी प्रशस्तै भेटिन्छन् । बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उनीहरु अरुको भविष्य हेर्नमै व्यस्त ... Read More
NEWER POSTहुलाकी राजमार्गमा पनि आधुनिक शहर
OLDER POSTअब सिटौला र बिश्वप्रकाशको भबिस्य के होला ?
बृद्धाश्रमहरु बन्द गर्नुपर्छ : मेयर
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसकाे निधन